Otu esi agbado PVC ala-News-Topflor China nwere oke
Otu esi agbado ala PVC
Echiche:64 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Usoro uzo nke ala PVC: ichapu na igbutu, ma obu ihe ndi ozo ma obu ihe nkpuchi, kwesiri itinye ya na saiti karia 24 awa, jiri ihe ncheta ihe weghachite, ogo di na ebe iwu ihe.
Mgbe ị na-agafe, họrọ akara na nchacha kwekọrọ na ala dị iche iche.
Mgbe ị na-atọgbọ mpịakọta, pịa otu njedebe mpịakọta. Buru ụzọ hichaa ala na azụ nke eriri igwe ahụ, wee kpochaa gluu n'ala.
Mgbe ị na-ebufe blọk ahụ, gbanwee blọk ndị ahụ site na etiti ruo n'akụkụ abụọ, ma hichaa ala na azụ ala ahụ ma kpoo ha.
Mgbe ike gwụchara ma na-agagharị, mgbe e mesịrị ụlọ ahụ, buru ụzọ kpoo elu ala ahụ na ihe mkpuchi iji mee ka ikuku dị nro na ịpịpụta ikuku.
A ga-emerịrị ihe nkedo na ịkụ ọkpọ mgbe gluu gwọchara ya kpamkpam.
Jiri ntụ ọka pụrụ iche iji gwunye n'akụkụ mmiri. Iji mee ka ịgbado ọkụ ahụ, akwa ahụ ekwesịghị ịbanye na ala. The uzo omimi na-atụ aro ka 2/3 nke ala ọkpụrụkpụ.
N'ihi ịgbado ọkụ onuete, ntuziaka ịgbado ọkụ egbe ma ọ bụ akpaka ịgbado ọkụ akụrụngwa ike ga-eji na ịgbado ọkụ onuete.
Hot gbazee ịgbado ọkụ usoro:
1) All ịkwanyere n'ala coils kwesịrị trimmed na ụlọ ọrụ mmepụta ihe;
2) Usoro ọgwụgwọ mmiri na-ekpuchi nsọtụ nke mpịakọta ọzọ ma na-ekpuchi 15 mm;
3) Wụnye ihe ala ahụ na gluu ma jiri aka aka tụgharịa akụkụ ahụ. Bugharịa ihe nkedo 45 n'arọ;
4) Welt na-agbaze ịgbado ọkụ nwere ike na-eme 24 awa mgbe nrapado na bonded;
5) Slotting na slotting igwe ma ọ bụ aka ọrụ;
6) Gbanwee okpomọkụ na ikuku na-ekpo ọkụ, wụnye mgbatị ọkụ, ikpo ọkụ iji mee ka electrode gbazee n'ime tank, ike dị ugbu a n'oge ịgbado ọkụ, ogologo waya ahụ, na ọrụ ikpe na scrap iji dozie ọnọdụ kwesịrị ekwesị emetụta mmetụta setịpụrụ na ọsọ;
7) Jiri igwe onodu kwesiri ekwesi dika ntuziaka katalọgụ;
8) Tinye electrode n'ime mgbado ọkụ, wee tinye electrode ozugbo na oghere ahụ;
9) Jide ọkụ ọkụ ọkụ, payaa ntị iji nọgide na-enwe ezi nkuku bụ na ịgbado ọkụ n'ọnụ bụ ihe na ala ihe. A ezi weld kwesịrị ịbụ ndị na-ịgbado ọkụ mkpanaka dị jubigara ókè uzo n'ọnụ na abụọ. Ọ bụrụ na tojupụtara ahụ karịrị akarị, ọ na-agba oke ọsọ nwayọ nwayọ. Weldzọ ịgbado ọkụ ziri ezi na-eme ka mkpanaka ịgbado ọkụ daa na uzo na ịgbado ọkụ ọkụ agaghị ere ihe ala;
10) The electrode ga-ọma mma tupu shọvel;
11) Mgbe jụrụ, shọvelụ na-ekewa abụọ, nke mbụ oge na-agụba kwekọrọ na shọvelụ eku. Oge nke abụọ, electrode kwesịrị ikpochapụ na elu nke ihe ala;
12) Mgbe a na-ebugharị eriri mmiri, wepụ electrode karịrị ma mepee ogologo ogologo 2 cm na njedebe nke electrode mbụ. Nwere ike ịmalite ịgbado ọkụ site na ntụgharị ihu. Mgbe ị kpuchisịrị akụkụ nke oghere nke electrode mbụ, ị nwere ike ịga n'ihu na-eje ije ihe dịka 2 cm.
Kedu ihe bụ ihe achọrọ maka ntọala ntọala maka ịkwanye PVC ala
Mmezi nke PVC ala!